Madaxweynaha oo kormeer ku soo maray xarumo ku yaala Burco, mashaariicna xadhiga laga jaray | Somaliland.Org
Madaxweynaha oo kormeer ku soo maray xarumo ku yaala Burco, mashaariicna xadhiga laga jaray
November 11, 2012	Hargeysa (Somaliland.Org)- Madaxweynaha Somaliland. Axmed Maxamed maxamuud (Siilaanyo), oo ku guda jira socdaal shaqo ku marayo gobolada Saaxil Tog-dheer, ayaa maanta xadhiga ka jarey mashaariic laga hirgaliyey magaalada Burco xarunta gobolka Tog-dheer, waxaaanu sidoo kale Madaxweyne Axmed Siilaanyo, kormeer ku soo marey mashaariic horumarineed oo hirgalintoodu ka socota magaalada Burco.
Madaxweynuhu dhismayaasha uu xadhiga ka jarey ay kala ahaayeen, dhisme lagu kordhiyey Cisbitaalka magaalada Burco, dhisme lagu kordhiyey dugsiga sare Sheekh Bashiir iyo dusiga Sheekh braahim oo dhamaantood ku yaala magaalada Burco.
Wasiirka Wasaarda Waxbarashada iyo Tacliinta Sare. Samsam Cabdi Aadan iyo wasiirka wasaarada caafimaadka, Dr. Xuseen Muxumed Maxamed (Xoog), ayaa Madaxweynaha warbixin ka siiyey mashaariicda horumarineed ee laga hirgaliyey magaalada Burco xarunta gobolka Tog-dheer.
Madaxweynuhu wuxuu kormeer ku soo marey madaarka magaalada Burco oo xilagan uu ka socdo dhisme iyo wadada isku xidha magaalada Burco iyo Oodwene, waxaanu madaxweynuhu warbixino kaga dhageystay masuuliyiinta ku howlan mashaariicdaasi, maxaanu u rajeeyey in Illaahey u fududeeyo mashaariicdaasi dhameystirkooda waxaanu madaxweynuhu ku tilmaamay in mashaariicdaasi yihiin kuwo dhaxal gala.
Madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), waxaa kale oo uu magaalada Burco maanta ka furey Taangi Biyood xajmigiisu qaadayo 620 Foosto ay ka cabi doonaan dadweynaha ku dhaqan xaafadaha dhanka koonfureed ee Burco.
“Booqasho caadiya weeye oo aan ku soo marayey gobolka Tog-dheer iyo gobolka Saaxil iyo meelo dhowra oo aan soo marey qeybo ka mida, waxa dhaqan ii ah inaan markaan muddo joogaba inaan mar dalka goboladiisa kala duwan aan soo maro si aan xaaladooda u soo ogaaado,”ayuu yidhi Madaxweyne Axmed Siilaanyo oo maanta u waramayay Laanta Afsoomaaliga ee BBC-da.
Madaxweynaha oo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi “Waxa jira mashaariic iyo howlo aan soo furay sida gobolka Saaxil magaalada Sheekh oo aan soo furey Cisbitaalkii magaaladda. halkan (Burco), waxaa jirey mashaariico dhowr ah oo aan furey mudadii aan joogay oo bulshada wax tar u leh.”
Madaxweynaha waxa socdaalkiisan ku weheliyay marwadda koowaad ee Somaliland Marwo Aamina Sh. Maxamed Jirde, Wasiirrada Madaxtooyadda, Waxbarashada, Duulista hawadda, hawlaha guud iyo Duulista Hawadda iyo Taliyaha ciidanka Booliska.
Previous PostGuddoomiyaha XAQSOOR Oo ka hadlay siday magaca Ururka ku doorteen iyo doorashada deegaankabaNext PostGudida diiwaan Gelinta oo Baaq u diray Axsaabta, kana hadlay habka loo kala saarayo	Blog